Résolutions du CONECS du 26 novembre 2008 (versions malgache et française) - Le blog de Alain Rajaonarivony
<< Ravalomanana : le meilleur... Le Blog de Alain Rajaonarivony >>
rabesaona 07/02/2009 16:11
koa satria tsy alefanareo ny forum dia aleoko manoratra amin'ity,
Dia tsy nataonareo akory ny sensibilisation ny olona tsy hamono tena eny Antaninarenina fa dia faly fotsiny ianareo androany, afapo nareo zao fa maro ny maty an! Nitifitra ny polisy fa izay no asany, miaro an'io toerana io, tsy misy tsininy izany.
Tena manome tsiny anareo mpanao gazety aho satria fantatrareo fa ny fifidianana ihany no demokratika kanefa dia tsy nataonareo tanaty editorial akory izay. maninon raha novoizinareo ny election anticipee sa zara misy ra mandrika amin'izay acceleree ny tantara?
tena tsy misaina izay mahasoa ny olona sy ny firenena ianareo rehetra!